musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi Vanotamba Nhabvu Giorgio Chiellini Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "King Kong". Yedu Giorgio Chiellini Childhood Indaba ne Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehuduku hwake kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvemhare yake kudzivirira mano asi vashomanana vanofunga nezveGiorgio Chiellini's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga uye Hwemhuri
Giorgio Chiellini akaberekwa musi we 14th waAugust 1984 paPisa, Italy. Akazvarwa kuna amai vake, Lucia Chiellini (mutariri webhizimisi) uye kuna baba vake, Fabio Chiellini (nyanzvi yemapfupa panguva yeChiellini kuberekwa).
Kunyange zvazvo Chiellini akaberekerwa muruwa rwePisa rweItaly, akakurira nemhuri yake munharaunda yakapoteredza yeLiborno iyo inonzi 25.1 makiromita kubva kuPisa uye inonyanya kuzivikanwa nevakashanyira vatashanyi.
Kuberekwa nevabereki vaishanda zvakazara nekubhadhara Mabasa ekutsvaga, Young Chiellini aiva nerusununguko rwekuzvisarudzira chero basa raanosarudza pamwe nekushanda nesimba mune chero mutambo iye fancies.
Kuti zvivepo, Chiellini akatanga rwendo rwake rwekunyanya kutamba nebhokisi mumutambo unenge usingaoneki unoita kuti hunobudirira hwake hwekukwikwidza huvepo sehutano hwakawanikwa. Chisarudzo chekutanga cheChielini yemutambo chaive Basketball, mutambo waaitamba mumakore ake ekugadzirisa uye akazvibatanidza zvakanaka nezvikoro zvakanaka kwazvo.
Zvisinei, Chiellini yakabatanidzwa muBhikball yakanga isina nguva sezvo yakanga isingatariswi yakareba kuti iite mitambo yemakwikwi, chiitiko chakamuita kuti amutse gamba guru rebhobho maari nekunyora kuLidorno 9 FC paaiva nemakore matanhatu. Apo paakanga aripo, akachengetedza mapepa nezviitiko munyika ye basketball uye achingova fan fan Kobe Bryant uye LA Lakers.
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Career Buildup
Chiellini akazvipira makore 10 oupenyu hwake achitamba nemakwikwi eveVidorno FC vasati vawana kukurudzirwa kumutsara wekutanga wekambani mu2001. Kugara kwake pachikwata kwakamuona achiratidza unyanzvi hwekudzivirirwa kwepamusoro-chekuti Mutariri weLiborno panguva iyoyo aisagona kubatsira kubvuma sezvaakambotsanangura Chiellini nenzira inotevera;
Giorgio isimba rezvisikwa, mutambi wepasi rose uyo mutungamiriri wese angada muboka ravo. Anobva kune imwe nyika uye anogona kuisa vatambi vatatu panguva.
Kuita zvekutamba kwebhodhi kwakaona Chiellini aive nemugove weRoma, akasayirwa naJuventus uye akatengeswa mubasa rekugovana neFiorentina. Nguva yacho yakaonawo Chiellini ichikwira kumusoro kwedzidzo apo iye akapedza chikoro chesekondari kuti aite chidimbu muEconomics nehutano muBusiness administration.
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Simuka Mukurumbira
Juventus akachengetedza zvizere zveChiellini muna 2005 uye akaita kuti ave mutambi wenguva dzose mumakwikwi ekutanga team. Murwi wake wokutanga mukurumbira waibatsira kambani kukunda itsva ye29th scudetto, zita iro rakazoyeukwa mushure mokunge 2006 "Calciopoli" inonyadzisa.
Kunyange zvakadaro, Chiellini akashanda pamwe chete neboka rake mumwaka akatevera kuti azviratidze somumwe wevadziviriri vakanakisisa uye akavhara mazita akawanda anozivikanwa pakati peiyo aiva 2011 / 2012 Scudetto pamwe nekufambira mberi kweEuro 2012 yekupedzisira. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Ukama Hupenyu
Chiellini ari kurarama achifara nemusikana wake kana kuti musikana akatendeuka mudzimai, Carolina Bonistalli.
Vakaroorana avo vane ukama hwakadzokera kumashure avo vachiri kuyaruka vakataura kuti vakabatanidzwa muna May 2014 vasati vashandura mhiko pamhemberero yega yeKaturike, musi weMugovera 17th yaJuly 2014 paSanctuary yeMontenero muLiborno.
Kubatana kwavo kunokomborerwa nemwanasikana, Nina uyo akaberekwa munaJuly 2015. Hazvisi kuramba kuti anokoshesa mukunda wake sezvaakanyora pamusoro pake pawebsite yake:
"Ndine rudo rutsva kupfuura yebhola ... Nina ... Ndiri baba vanofara kwazvo munyika"
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Biting Scandal
Chiitiko chisina kunaka chakakonzera kutsamwa mubhobho yenyika chaiva kushungurudza kunotyisa pakati Luis Suarez uye Chiellini. Suarez, uyo akazviratidza kuva ane zvakakwana zveChiellini's hard tackling defense akachera mazino ake mufudzi reChiellini asingabatwi kana kubhadharwa nomupurisa ari kutamba mumutambo wekupedzisira weBrazil neUkuraguay paCNC World Cup muBrazil.
Kutaura nekutsamwa pamagumo emutambo Chilleni akasimbisa izvozvo;
'Suarez is sneak uye anobva aenda nayo nokuti Fifa inoda kuti nyeredzi dzadzo dzidzere muNyika yeNyika. 'Ndinoda kuona kana vane ushingi hwokushandisa uchapupu hwepikicha pamusoro pake. Mupurisa akaona chiratidzo chekuruma zvakare, asi haana kuita chinhu pamusoro payo. '
Kune rumwe rutivi, Suarez akaedza kuderedza chiito chake chinonyadzisa nokugadzirisa kuti:
'Izvi ndizvo zvinhu zvinoitika pamharaunda, isu tose tiri munharaunda, akaisa fudzi rake mukati mangu. Zvinhu izvi zvinoitika pazviri, uye hatifaniri kuvapa zvakanyanya (kukoshesa).
Zvisinei, Suarez akawanikwa aine mhaka uye akapiwa mwedzi mina kubhadharwa mumusha uye kupfigirwa kwemarudzi mapfumbamwe kumarudzi ose. Mushure mechinguva, akateterera kukumbira ruregerero kwete kwete Chiellini asi yose yebhola yenyika.
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Nzira Dzakadzivirira Dzinokuvadza
Kunyange zvazvo chiri chokwadi kuti Chiellini ndiye akabatwa munyaya yekunyomba pakati pake naSuarez, hapana chikonzero chekuti chiellini inoshandisa nzira dzisina kunaka dzekushanda zvakaoma mumunda wekutamba. Chinoonekwa pakati pezviito zvakadaro chaiva chiitiko chakamuona asina-chinangwa (sezvaanoti) gorosi Miralem Pjanic panguva yemutambo pakati peJuventus uye Roma muna May 2014.
Achitaura nezvechiitiko Chiellini akasimbisa kuti haana kurara Pjanic nechinangwa achiwedzera kuti akaisa ruregerero kumunhu anoona akabatwa.
Ndakanga ndisiri kuedza kumukomberedza, sezvo ndaingoedza kumudzivisa kuti arege kubva kunze kwemasvingo, nenzira imwecheteyo yaunoita mubhodhi. Ndakakumbira ruregerero kuna Pjanic nokuda kwekubatana naye, asi hapachina matambudziko pakati pedu. Mumitambo yakaita seyi ndakapiwa kune vamwe vanogogodza uye ndakagamuchira vashoma chaizvo zvakare.
Zvisinei, Chiellini yakagamuchira mitambo yeSerie A yemabhanhire matatu nokuda kwechiitiko ichocho mushure meTV replays yakashandiswa kuongorora Chiellini nekukurukurirana kwaVaRoma. Chiellini anorohwa uye anowirwa nekuda kwekudzivirira kwake simba rakamuona achipwanya mhudzi yake kanomwe uye achida kuti vana vake vawane mhino yemudzimai wake seanopesana nemhino yake yakaipa.
"Ndinovimba kuti vana vangu vanotora mhino yaCaroline,"
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Chikonzero Chikonzero Chokutamba Nickname
Chiellini akanzi "King Kong"Nevafudzi nevatsigiri mukucherechedza simba, muviri uye utsinye hwaanoita semudziviriri uyewo mararamiro ake ekupemberera kunosanganisira kurova chifuva chake.
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Kwete Kungoti Bhora
Chiellini ndeimwe yevashoma vashambadzi vemazamu vakawana zvidzidzo zvepamusoro pasinei nekushanda nesimba mubhodhi. Muna July 2010, akapedzisa Laurea, kureva chikoro chebhakari mune zvemari uye yebhizimisi paYunivhesiti yeTurin uye zvakare, munaEpril 2017, akagamuchira Laurea Magistrale ie chiremba chekuita mabhizinesi kubva mune imwe sangano. Zvechokwadi iye chimiro chinofanirwa kubudiswa nevanouya.
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Twin Hama naAgent
Chiellini ane rimwe rakafanana nehama inonzi Claudio. Vakomana vaviri vakakurira sevana vane rudo vanotamba mitambo vane Claudio vachitsigira Juventus apo Chiellini yakada AC Milan. Zvisinei, mapatya akabatanidza rudo rwavo rwebhola saCladio uyo anoshanda saAgenzi waChiellini achiita kuti ave nechokwadi chokuti hama yake inofara paJuventus.
Giorgio Chiellini Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Zvimwe Zvako
Chiellini ane unhu hunhu hune simba guru, simba uye chivimbo. Iye anewo hutungamiri hukuru hwehutungamiri sezvo izvi zviri pachena pakusimuka kwake kubata chigaro cheJuvus's vice-captain nzvimbo pamwe chete nemashoko ake ehutungamiri kutaura mumunda. Zvose izvi zvinomuita kuti awedzere kufanana nevadzidzi vake uyewo kumuita munhu anozivikanwa pakati pevakomana.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinovonga nekuverenga yedu Giorgio Chiellini Childhood Indaba pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!